Ishibhile i-CNC evula ifektri yepulasitiki nabahlinzeki | I-Ouzhan
Izinzuzo zepulasitiki ezijika izingxenye
- IPlastiki inesisindo esiphansi nesisindo esincane.
- Amandla athile aphezulu nokuqina okuqondile.
- Ukuzinza okuhle kwamakhemikhali.
- Ukufakwa kahle kagesi.
- Ukwehliswa okuhle kokungqubuzana, ukumelana nokungqubuzana nokuzithambisa.
- Ukubumba okuhle nokusebenza kombala.
- Izici ezahlukahlukene zokuvikela ngokomzimba nangamakhemikhali.
- Akulula ukudlulisa ukushisa futhi kusebenza kahle ngokulondolozwa kokushisa.
- Izindleko zokukhiqiza eziphansi.
I-OEM eyenziwe ngokwezifiso ipulasitiki yokuguqula insizakalo yomkhiqizi wezingxenye zeplastiki ze-China CNC
I-Ouzhan ngumkhiqizi ohlanganisa imboni kanye nezohwebo, enikezela ngosizo olulodwa lokuguqula nokwenza izinsizakalo zomshini wokugaya umshini. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, ingacubungula ukucacisa okuphezulu kwe-CNC ukuvula izingxenye zepulasitiki ngekhwalithi ezinzile nethembekile. Lezi zingxenye zemishini zenziwa kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu zokusetshenziswa, ezitholakala kubahlinzeki bezingxenye ezisebenza kahle emakethe. Ithimba lethu lobuchwepheshe eliqinile nelingcweti kanye nokuphathwa kahle nokusebenza kwesistimu kungaqinisekisa ukukhiqizwa okuphelele kwezingxenye zomshini wokuphenduka wepulasitiki. Ngaphezu kwalokho, i-CNC ukuvula imikhiqizo epulasitiki inikezwe ngokuqinile ukuhambisana nezindinganiso zekhwalithi futhi ingasetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene zezimboni. Futhi singahlinzeka ngamanani entengo wokuncintisana epulasitiki ye-CNC yokuguqula imikhiqizo kumakhasimende ethu abalulekile.
Izici zezingxenye zepulasitiki ze-Ouzhan
Izinto ezisetshenziselwa ukucubungula okokusebenza okukhiqizwa kwizitshalo zokucubungula imishini ye-CNC zihlukaniswe izigaba ezimbili: izinsimbi kanye namapulasitiki wobunjiniyela. Izinsimbi zifaka i-aluminium alloy, insimbi, ithusi, ama-alloys ahlukahlukene aqinile, njll. Izinto ezijwayelekile ezitshalweni zokulungisa umshini ze-CNC zingamaplastiki ezobunjiniyela ngaphandle kwezinto zensimbi, futhi izinto zepulasitiki zinezinto zokufaka insimbi ezingenakubuyiselwa emuva.
Izinzuzo ze-Ouzhan Plastic Turning Service
- Konke ukunemba kwe-CNC okuphenduke imikhiqizo yepulasitiki kukhonjelwe ekuhlolweni okuqinile kwekhwalithi.
- Ngokuya ngemidwebo noma amasampula wokwenza ngokunemba izingxenye zokuphenduka zepulasitiki.
Langaphambilini Kwenziwe ngentando imishini yensimbi yekhabhoni yokuguqula izingxenye zokucubungula izesekeli
Olandelayo: UKWAKHA izingxenye zethusi
I-OEM yensimbi engenasici ejika izingxenye ngokwezifiso